भुल्ने बिमारी छ? यसरी गर्नुहोस् दिमागको अभ्यास : – Suchana Hub
भुल्ने बिमारी छ? यसरी गर्नुहोस् दिमागको अभ्यास :
काठमाण्डौ । तपाईँले आफ्नो मस्तिष्कको स्वास्थ्यलाई नाजुक बनाउनको लागि जानी नजानी धेरै गल्ति गर्नुभएको हुन सक्छ । अबदेखि आफ्नो स्मरण शक्ति बढाउनका लागी के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस ।
स्वस्थ दिमागका लागी दिमागको अभ्यास गर्नु निकै जरुरी छ । धेरै सोच्नाले दिमागको अभ्यास हुने गर्दछ , तर चाहिने भन्दा अत्याधिक सोच्नु र व्यर्थ कुरा सोँच्नु भने हानिकारक हुन्छ। विशेष गरी बिहान उठ्नासाथ आफ्नो दिमागलाई कुनै जटिल काम गर्न दिनुहोस्। भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
सुडोकु, लुडो जस्ता चुनौतीपूर्ण खेलले दिमागको क्षमता बढाउछ भने सम्झन सक्ने शक्तिलाई समेत जागरुक गर्दछ। बाघचाल, चेस, स्क्र्याम्बल जस्ता दिमाग चलाउन पर्ने खेलहरूले पनि तपाईँको दिमागको राम्रो अभ्यास गराउँदछ। दैनिक नयाँ नयाँ कार्य गर्ने गर्नुहोस् , सकेसम्म कतै जाँदा नयाँ बाटो जानु पनि निकै राम्रो हुन्छ । त्यस्तै केहि काममा कुनै एउटा हातको बेसी प्रयोग हुन्छ भने अर्को दिन सोहि कार्यमा अर्को हातको प्रयोग गर्नुहोस् , भिन्दाभिन्दै अनुभव लिने कोशिस गर्नुहोस्।
Previous बिना औषधी यसरी नियन्त्रण गर्नुहोस् ब्लड प्रेसर :
Next किन आउँछ डण्डीफोर ? यस्तो छ कारण….